Nsonaazụ Ahịa dị ka Afọ: Otu Dan Anton si zụlite azụmahịa SEO ya na 7 Figures Leverageging Testimonials | Martech Zone
Ahịa ejiri ọdịnaya, ejiri nyocha, KPI buzzword ahịrịokwu na ire ahịa nke gara na nkwubi okwu ya, ndị ahịa azụmaahịa na-ede blọgụ banyere isiokwu ndị na-enweghị isi. jikọọ ma ọ bụ iji debe weebụsaịtị ha ọhụrụ.
Ọdịnaya abụghị ụzọ maka njedebe
Ọtụtụ afọ gara aga Google nwere mmasị ịhazi weebụsaịtị ka ukwuu ma nwekwuo ọdịnaya. Nke a na - eduga ndị na - ede blọgụ, ndị mmekọ, na ndị nwe azụmaahịa na - achọpụta mediocre ọdịnaya ad nauseam, na nkwa nke atụmanya maka nlọghachi Google n'ọdịnihu, okporo ụzọ.
Ugbu a, algorithm na-amasị ahụmịhe onye ọrụ dị ka ihe akaebe site na ịrị elu nke Ndị ọrụ SERP na-emetụta oke ọrụ dị ka CTR (pịa site na ọnụego), Bounce Rate (ọ bụrụ na mmadụ ahapụ ebe nrụọrụ weebụ gị ozugbo), na Oge Dwell (oge nkezi na saịtị / ibe). Ngbanwe a emeela ka nsogbu na ọgba aghara dị n'etiti ala ọdịnaya na ndị na-ede blọgụ zombie bụ ndị na-echekwu ọdịnaya bụ azịza maka ịre ahịa ahịa ha na nsogbu okporo ụzọ, ebe ha na-agbada na-ada ụda na-efu ma mepụta ọdịnaya ndị ọzọ, na omume nke ara na ihe efu.
Kọọ Akụkọ Na-adịghị Ackụ: Ọdịnaya maka Ntugharị
Nna m ochie nwere ike ịkọ otu akụkọ n’akụkụ ọkụ maka na oge ya na nnyefe ya zuo oke. Ezigbo akụkọ na-enye ndị na-ege ntị ntị ma kwuo okwu ozugbo maka mmasi ha, nke bụ ụzọ doro anya, mana eji eme ihe; gịnị dị na ya maka onye na-ege ntị? Ihe ntinye ederede ma obu ihe omuma banyere ihe omuma ochie agaghi eme ka ogwu di n'ahịa onye na-eme achịcha, dịka ọkwa ogologo oge na iwu ịza ajụjụ agaghị emeri ndị ahịa ọ bụla.
Ozi, ma ọ bụ agụmakwụkwọ dị ka ire ahịa ọdịnaya bụ ụzọ na-ezighi ezi. N'ezie, anyị nọ na ozi buru oke ibu, yana Ogologo kilomita 339 juputara na iPads enweghị ike ijide weebụ zuru ụwa ọnụ na 2010, na ọnụọgụ data na-arịwanye elu kwa afọ. Ọnụọgụ ndị ahụ na-egosi ihe kpatara usoro ụzọ ochie nke ịnwa ịkụziri ma ọ bụ ịgwa ọha na eze ji azụ ahịa igbu onwe. Betterzọ ka mma bụ ịgwa a ihe mgbu nke atụmanya ma gosipụta na ị nwere ike inyere ya aka idozi ya, ma ọ bụ ma ọ dịkarịa ala belata nsogbu ha.
Mgbakwunye, ndị nnọchi anya mba, na ahụmịhe ndị ahịa
Mgbe ole Dan Anton nke mbụ malitere ịre ahịa n'ịntanetị ọ ghọtara ụkpụrụ nke Og Mandino, iji mee ka mmadụ nwekwuo uru ị ga-enwerịrị ịgbalịsi ike, ụzọ dịkwa mma karịa ka ndị ọzọ na-akwalite ngwongwo ma ọ bụ ọrụ gị? Amara dị ka ndị mmekọ ma ọ bụ ndị nnọchi anya ika, ndị ahịa a na-eguzosi ike n'ihe n'ihi na ị doziri nsogbu ha, ma gafee atụmanya ha. N'ezie, ihe ka ọtụtụ ga-achọ ka a kwụọ ha ụgwọ maka nkwalite nke ngwaahịa gị ma ọ bụ ọrụ gị nke mere na nyiwe dịka JVzoo, Clickbank, Amazon na ndị ọzọ na-adị iji nye ndị na-achọ ịkwalite ezigbo mma ma ọ bụ ọrụ nkwado ego.
Iji mee ka ndị ọzọ kwalite ngwaahịa gị ọ chọrọ a) ọrụ b) nwee oke ego iji kwado ike "ahịa". Ndị na-ere ahịa n’ Internetntanet malitere ịmepụta ọmụmụ ihe nke aka ha, na-egosi otu ngwaahịa SaaS (ngwanrọ dị ka ọrụ) si edozi nsogbu ha - ọkachasị ahịa ịntanetị. Ugbu a, kama ịbụ naanị ihe ọmụmụ mbụ nke Dan na ndị otu ya, e nwere ọtụtụ narị ndị ọzọ na-ekwu okwu, na-atụle ma na-akwalite ụdị ahụ. Ọbụna ma ọ bụrụ na Dan kpebiri ịmepụta 10,000 blog posts banyere ọgbọ okporo ụzọ n'ịntanetị, ọ gaghị aba uru nke ndị ahịa ụwa n'ezie na ire ahịa site na ịmepụta ngwaahịa siri ike, yana iji ihe ọmụmụ banyere ndị tụkwasịrị obi, ndị ọkachamara n'ịntanetị kachasị.
Ka ọ dị ugbu a enwere ihe karịrị 15,300 nsonaazụ na Google maka BacklinksIndexer Review, yana ihe karịrị 4,500,000 maka Igwe Ntugharị M Na-enyocha M. Ọ dị mkpa iburu n'uche ihe ọmụmụ mbụ ahụ bụ ihe na-akpali akpali, na-enye ndị ọzọ ume na-agbaso ihe ọmụmụ nke aka ha, na-esochi akaebe na nzukọ ndị a ma ama dị ka WarriorForum, BlackhatWorld, na ndị dị ka Terry Kyle na Jon Leger. Ihe nlere vidiyo na nseta ihuenyo n'okpuru:
Asịrị, Hype na Ọdịnaya Ọdịnaya Ọdịnihu
Onweghi onye choro ikwurita banyere ihe ochie dika agaghi adi, ma obu ihe na-adighi nma. Ndị mmadụ bụ dọtara ndị mmeri ma na-emeri ndapụta. Akụkụ mbụ nke ịtụgharị ngwaahịa Dan site na ngwaahịa ịntanetị bụ akụkọ ndị ahịa n'ụdị ọmụmụ ihe, ma ọ bụ ụdị adịghị ike, nlebara anya, nke mere ka ndị mmekọ na ndị ọzọ na-akwalite ya. Akụkụ nke abụọ na-achịkọta oke ọkụ iji nwee ike ịmị nnukwu ume. Mmasị na ọkụ dị oke egwu iji ruo ọnụ ọgụgụ buru ibu, dị ka ndị hụrụ Shark tank mmetụta, ebe ndị na-asọ mpi na-ahụ nnukwu ahịa na ahịa na mmasị ndị ọzọ na-etinye ego naanị site na isoro TV show.
A makwaara dị ka PR, ma ọ bụ Mmekọrịta Ọha, ọ na-adịkarị mfe inweta akwụkwọ akụkọ, mgbe ị pịrị, nke bụ ihe njakịrị na-atọ ọchị 22. Obodo ndị kachasị elu na ndị ọkachamara dịka Semantic Mastery, Mike Site Maine, na Carl Radley niile rịọrọ ajụjụ ọnụ na Dan ka tụlee ngwaahịa ya na-abawanye ụba na agụụ, na-akpata ọnụọgụ asaa kwa afọ.
Ezigbo Ngwa ofwa nke Na-emegharị Dan Anton's SEO .ga nke Ọma
Ọ bụghị azụmahịa niile nwere okomoko nke na-enye ndị mmekọ mgbakwunye ma ọ bụ ndị nnọchi anya ama. Ọ bụrụ na ị na-ere kuki, ezé na-acha ọcha ma ọ bụ ndị ọka iwu na-enye gị ohere ịnweta ego ị ga-enweta, ma ọ bụ nọrọ n'àgwàetiti megide asọmpi ahụ. Principleskpụrụ nke otú Dan si nwee ike ịba ngwa ngwa nwere ike tinye ya na ụdị azụmaahịa ọ bụla, agbanyeghị na itinyekwu uche na nyocha ndị ahịa, yana ọmụmụ ihe.
Okwu nyocha ejirila nyocha dijitalụ mee ka okwu onye ahịa na ahụmịhe ya biri na-emetụta ndị ọzọ ruo mgbe ebighị ebi. O zughi ezu ị nweta nyocha, dịka asọmpi nwere ike ịnwe ha; ị ga-akọrịrị akụkọ site na ịga ọmụmụ ihe siri ike. Zute Bob, o nwere ezé na-acha odo odo ma ghara ịpụ na ụbọchị na 5 afọ, ma ugbu a, ọ nọ na ihu ọchị ọhụrụ ya, ma zute ịhụnanya nke ndụ ya mgbe ọ na-acha ọcha ọcha ya. N'ezie, nke a na-egosi na ị na-enyere ndị mmadụ aka inweta ezigbo ọmụmụ ihe, dịka ụmụ mmadụ nwere ọgụgụ isi nwere ike ịhụ ụgha 90% oge. Ugbu a nyochaa gbanwere ka ọ bụrụ akụkọ nwere ike ịkọ ọzọ. Sally nwere nnọkọ nnukwu ụka ma chọọ kuki 500 site na Mọnde, ọ nweghị ụlọ ọrụ na-eme achịcha ọzọ dị njikere inyere ya aka, ruo mgbe ọ kpọtụrụ anyị ebe a na-eme bred. Ọ bụrụhaala na ị kwadoro n'ụzọ ziri ezi onye ahịa, yana gafere atụmanya ha o yikarịrị ka ha ga-ekwe ka ọmụmụ ihe ọha na eze gị ma ọ bụrụhaala na ị na-akwanyere ha ùgwù ma na-eme ihe ziri ezi. Ugbu a, azụmaahịa nwere otu "nyocha" enweghị ike ijikọ na ọkwa dị omimi, nke mmadụ maka na ha bụ naanị ụlọ ọrụ iwu 5, ebe ị nyeere Joe aka inweta ego iji nyere aka kwụọ ụgwọ mmefu ahụike ya.
Ọdịnaya ahaziri iche: Na-ele Ihe Ọmụma Knowledge anyị nwere mgbe ochie
N'ụwa ebe ọtụtụ mmadụ na-elekwasị anya na ịghara iji ha mee ihe, ndị mmadụ jidesiri ike, na enweghị mmejọ nke aka ha chọrọ ka ha mata gị dị ka onye nwe azụmaahịa na-eche banyere idozi nsogbu ha n'ezie, ọ bụghị naanị iwe obere akpa ha.
Za ọtụtụ usoro ekwentị na-akpali naanị ịkwụsịtụ na nkụda mmụọ na-egosi mbọ iji dehumanize usoro ahịa na ahụmịhe ndị ahịa. Ọ bụ ụlọ ọrụ na-ekpebi ịga nke ọzọ, na-ebugharị onwe ha, nke na-enweta ntụkwasị obi na azụmaahịa nke ndị gụrụ akwụkwọ na ndị nwere ikike taa.
Nke a na - eduga na otu n'ime ndị ahịa Dan Anton chere ihu ahịa azụmaahịa dijitalụ, SEO nke Atlanta, ebe onye ahịa ọ bụla natara ntụzịaka vidiyo ahaziri iche, 1 ka 1. Ọ bụ vidiyo nkeonwe, naanị maka otu onye. Mpempe akwụkwọ a “ọdịnaya” na-ewe ihe dịka elekere 2 iji mepụta, ma nwekwaa kpamkpam. Echiche nke igosi onye ọchụnta ego ihe niile n'ihu na enweghị akwụ ụgwọ ma ọ bụ nkwekọrịta na-atụ ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ere ahịa ụjọ, dịka ekpughere "nzuzo" na ha agakwaghị achọ gị, na-eduga n'ịla ahịa, na igbu oge.
Ihe mere eme gosiri na ọ bụ ihe megidere nke a. Mgbapụta showskpụrụ na-egosi mgbe ị gosipụtara n'ụzọ doro anya na n'amaghị ama, ọ bụghị naanị ikwu, otu ị ga - esi melite atụmanya ndụ na ọkwa onye ọ bụla, ọnụego ntụgharị na ọdịnaya na-abawanye. Foto dị n'okpuru ebe a bụ foto oge were oge ịlele nyocha ole na ole, yana otu vidiyo vidiyo. Rịba ama na ịlele oge elere anya buru ibu karịa ọkwa ụlọ ọrụ 4 nkeji na 12 sekọnd.
Nchikota nke njuta onwe onye, ​​ihe omuma nke ndi mmadu site na omumu ihe, na ihe omuma maka atumatu ahia / mmefu ego emeela ka onu ogugu di elu karie, ma obu ihe kariri 150% na abawanye ihe oriri ma oburu na e jiri ya tụnyere oge oru nke oge.
Ndi mmadu dika ọdịnaya: Ndi mmadu na ndi ahia na ndi mmadu
Imirikiti ndị na-azụ ahịa na-atụ egwu itinye ihu ha ma ọ bụ kwupụta uru ha bara, na ihe kpatara ha ji achọ ịchụ azụmaahịa atụmanya. A na-akwụghachi ndị na-akwụghachi ụgwọ, dị ka ihe ngosi site na ntụgharị ntụgharị na-arịgo 500% site na ịgbakwunye vidio ọpụpụ na weebụsaịtị Atlanta SEO dijitalụ na-elekọta mmadụ, site na 1 na-eduga ụbọchị ruo 5, yana otu ọkwa na ogo nke okporo ụzọ. Ijikọ, ọbụlagodi na elu elu, na-enye gị ohere iji mechaa nweta ntụkwasị obi ha na azụmaahịa ha site na omume, ọ bụghị nkwa efu. Otu ụzọ vidiyo ahụ, njikọ mmadụ na mbụ, na-apụ n'ụlọnga na-enweghị ihe ọ bụla, n'ihi ụjọ, enweghị mgbagwoju anya, ma ọ bụ ọbụna enweghị mmasị. N'ikpeazụ, ọ dị mkpa ka ọdịnaya dị ka oku na-aga ime ihe.
5 Atụmatụ na Increbawanye okporo ụzọ na ebe nrụọrụ weebụ Bakery gị bụ ụzọ ochie iji mepụta ahịa ọdịnaya. Ejirila nyocha, akuko akụkọ (ihe ọmụmụ), ndị nnọchi anya (ndị mmekọ), pịa, ịhazi onwe gị (na ndụmọdụ), na mmadụ (na-ekwupụta atụmatụ gị dị ka a ga - asị na ha bụ enyi a tụkwasịrị obi ma ọ bụ onye otu ezinụlọ) Nke a bụ otú Dan Anton si tolite site na ụlọ ọrụ sọftụwia otu mmadụ iji weghara ọtụtụ ndị ọkachamara gafee ụwa ma na-elekọta ọtụtụ puku ndị ahịa, na-enweta ọnụ ọgụgụ 7 kwa afọ. Ọ bụrụ na ị kwenyere n'ihe ị na-eme, ọdịnaya bụ ụgbọ gị iji kewaa gị na ìgwè nke mediocrity.
Tags: MmekọrịtaamazonAndy greenhawBacklinksIndexerNwaigweụba ọnụegondị nnọchiteanyaclickbankndị akaebeigele.mectrAhịa Ahụmahụndị akaebe ndị ahịagoogle +igbe ntinyeNKWOOg Mandinoisi ihe mgbuatụmanya mgbu isiserp ibiaghachi ọnụegoserp pịa site na ọnụegosert ctrserp biri ogeserpsịkọ akụkọonye ọrụ akaWarriorForum